မမှီမကနျးတှလှေမျးမနာ လိုဖွဈနတေဲ့သူတှကေိုLive တဈကွိမျလှငျ့ သိနျး ၁၀၀ တောငျ စိတျပါမှအလုပျလကျခံကွောငျးပွောပွလာတဲ့ အာဗွဲစိနျ – Alanzayar
မမှီမကနျးတှလှေမျးမနာ လိုဖွဈနတေဲ့သူတှကေိုLive တဈကွိမျလှငျ့ သိနျး ၁၀၀ တောငျ စိတျပါမှအလုပျလကျခံကွောငျးပွောပွလာတဲ့ အာဗွဲစိနျ
ဟငျးခကျြနညျးvideo လေးတှကေစပွီး ပရိသတျသတိထားမိကာ ခုခြိနျမှာ အာဗွဲစိနျဆိုတာနဲ့ပရိသတျတှခေဈြပွီး အားပေးနရေတာပါ။ ဒီ pageလေးကိုပရိသတျတှခေဈြပွီးလူကွိုကျမြားအောငျဖနျတီးပေးခဲ့ တဲ့သူကတော့ နာမညျကြျောမငျးသားကွီးဖွဈခဲ့တဲ့ နမြေိုးအောငျရဲ့မိနျးမ သန်တာနမြေိုးအောငျပဲဖွဈပါတယျ။ ကိုယျတိုငျ ဟငျးလေးတှခေကျြပွီးထုတျလုပျနိုငျတဲ့အထိအောငျမွငျနခေဲ့ တာပါ။
သူမကတော့ခုနောကျပိုငျးမှာ Live လှငျ့ဈေးရောငျးဖို့ပါကမျးလှမျးခံနရေတာပါ။ သူ့ Liveတိုငျးမှာလညျးဝယျယူသူမြားစှာနဲ့အောငျမွငျနပွေီဖွဈပါတယျ။ သူမတို့မိသားစုလေးဟာ လူမှုကှနျရကျမှာလညျး ပရိသတျခဈြခငျမှုရရှိပွီး တဈနတေ့ဈခွားအောငျမွငျမှုတှတေိုးလာခဲ့တာဖွဈပါ တယျ။ ဒါကွောငျ့လညျးအောငျမွငျလာတာနဲ့အမြှ မနာလိုတိုကျခတျသူတှပေါကွုံတှနေ့ခေဲ့ရတာပါ။ ဒါကွောငျ့ခုလိုပဲ ပညာသားပါပါဝဖေနျသူတှကေိုပွောလို ကျတာဖွဈပါတယျ။ ( Edit ဟော မမှီမက နျးတှေ မ နာ လိုမနျ့တှေ နဲ့လာပါပွီ မှီအောငျလိုကျခဲ့နျော ဖွေးဖွေးပဲသှားပါမယျ)
ဆိုငျက ဝနျထမျးကအနျတီ ရတနာ Live ဘယျလောကျလညျးတဲ့သိနျး ၃၀ လို့ ၂ နာရီကို ၁ နာရီထပျတိုး၁၀ သိနျးထပျဆကျတယျ ၁၅ သိနျးထား ပါတဲ့တဈပတျတဈကွိမျလှငျ့ခငျြတယျတဲ့ ဟုတျကဲ့မရလို့ပါရှငျ့လို့…. မွေ Live တဈကွိမျလှငျ့ သိနျး ၁၀၀ တောငျလာအပျထားတဲ့မွပေိုငျရှငျတှအေမြားကွီးပါရှငျ့ စိတျပါမှအလုပျလုပျပါတယျမိတျဆှစေဈဆို အလကားလညျးကူညီပါတယျ။အလုပျပေးကွတဲ့ သူအားလုံးကိုကြေးဇူးပါရှငျ့ ဆိုပွီးရေးသားထားခဲ့ တာပါ။ crd
မမှီမကန်းတွေလှမ်းမနာ လိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုLive တစ်ကြိမ်လွှင့် သိန်း ၁၀၀ တောင် စိတ်ပါမှအလုပ်လက်ခံကြောင်းပြောပြလာတဲ့ အာဗြဲစိန်
ဟင်းချက်နည်းvideo လေးတွေကစပြီး ပရိသတ်သတိထားမိကာ ခုချိန်မှာ အာဗြဲစိန်ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်ပြီး အားပေးနေရတာပါ။ ဒီ pageလေးကိုပရိသတ်တွေချစ်ပြီးလူကြိုက်များအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ တဲ့သူကတော့ နာမည်ကျော်မင်းသားကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေမျိုးအောင်ရဲ့မိန်းမ သန္တာနေမျိုးအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ဟင်းလေးတွေချက်ပြီးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်နေခဲ့ တာပါ။
သူမကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာ Live လွှင့်ဈေးရောင်းဖို့ပါကမ်းလှမ်းခံနေရတာပါ။ သူ့ Liveတိုင်းမှာလည်းဝယ်ယူသူများစွာနဲ့အောင်မြင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူမတို့မိသားစုလေးဟာ လူမှုကွန်ရက်မှာလည်း ပရိသတ်ချစ်ခင်မှုရရှိပြီး တစ်နေ့တစ်ခြားအောင်မြင်မှုတွေတိုးလာခဲ့တာဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့်လည်းအောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှ မနာလိုတိုက်ခတ်သူတွေပါကြုံတွေ့နေခဲ့ရတာပါ။ ဒါကြောင့်ခုလိုပဲ ပညာသားပါပါဝေဖန်သူတွေကိုပြောလို က်တာဖြစ်ပါတယ်။ ( Edit ဟော မမှီမက န်းတွေ မ နာ လိုမန့်တွေ နဲ့လာပါပြီ မှီအောင်လိုက်ခဲ့နော် ဖြေးဖြေးပဲသွားပါမယ်)
ဆိုင်က ဝန်ထမ်းကအန်တီ ရတနာ Live ဘယ်လောက်လည်းတဲ့သိန်း ၃၀ လို့ ၂ နာရီကို ၁ နာရီထပ်တိုး၁၀ သိန်းထပ်ဆက်တယ် ၁၅ သိန်းထား ပါတဲ့တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်လွှင့်ချင်တယ်တဲ့ ဟုတ်ကဲ့မရလို့ပါရှင့်လို့…. မြေ Live တစ်ကြိမ်လွှင့် သိန်း ၁၀၀ တောင်လာအပ်ထားတဲ့မြေပိုင်ရှင်တွေအများကြီးပါရှင့် စိတ်ပါမှအလုပ်လုပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေစစ်ဆို အလကားလည်းကူညီပါတယ်။အလုပ်ပေးကြတဲ့ သူအားလုံးကိုကျေးဇူးပါရှင့် ဆိုပြီးရေးသားထားခဲ့ တာပါ။ crd
Previous Article တရားရငျဆိုငျဖို့ ထှကျခှါသှားကွပါပွီ
Next Article ချောင်းဦးရွာကို စစ်တပ်က ဝင်ရောက် မီးရှို့ ..see more